Vatican oo taageersan awood milateri oo lagu muquuniyo Daacish – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Vatican oo taageersan awood milateri oo lagu muquuniyo Daacish
Mareeg.com: Sarkaalka ugu sarreeya dublamaasiyiinta Vatican-ka u fadhiya xarrunta Qaramada Midoobay ee Geneva, Silvano Tomasi ayaa sheegay in adeegsiga awood milateri uu qasab noqon doono haddii Daacish jooji weydo weerarada joogtada ah ee ay ku heyso dadka Kiristanka ah ee ku kala nool Ciraaq iyo Suuriya.
Silvano Tomasi ayaa sheegay in Daacish ama Khalaafada Islaamiga ah ay caadeysatay iney beegsato dadka Masiixiyiinta ah ee ku nool Bariga Dhexe, wuxuuna tibaaxay in haddii xal siyaasadeed la waayo uu Vatican ogolaan doono in Daacish lagu muquuniyo awood milateri.
“Kiristaanka, Alazidiin, Shiicada iyo Sunniyiintu dhamaan waa banii’aadam u baahan in la dhowro” ayuu yiri Tomas oo intaa ku daray “Jihaadiyiintu waxey gumaadayaan dadka, waxaana qasab ah in laga hortago”.
Vatican ayaa waligeed diidi jirtay in awood milateri loo adeegsado xasarada ka taagan Bariga Dhexe, hase ahaatee waxaa haatan muuqata iney lasoo baxday waji cusub.
Taageerada Vatican ay siineyso in awood milateri loo adeegsado Daacish si loo ilaaliyo dadka Kiristaanka ah ayaa loo arkay mid dhiirinimo badan ku jirto.
Daacsh ayaa dalalka Suuriya, Ciraaq iyo Liibiya ku xasuuqday dad badan oo Kiristaan ah, taasoo keentay in Vatican taageerto tilaabo milateri.
Vatican-ka oo matala Kiristaanka aduunka ayaa warka kasoo yeeray wuxuu sababi karaa in loo arko in Kiristaanku dagaal u cadeystay dadka Muslimiinta ah, taasoo keeni karta colaado hor leh.
Shabeellaha Hoose: Dilal qaqal geliyey amaanka oo kasii socda Qoryooley